Wax Ka Baro 10 ka Shaqsi Ee Lacagaha Ugu Badan Ka Sameeyay Youtube Ka Sanadkan 2016 Ka. – Brandkii
Badanaa dadka waxa ay youtube channel u sameestaan yagoon qorshe weyn ka laheyn ama aan wax dhaqaale ah ka sameyn dad badan oo kale oo inaga mid ah ayaa yagu ka sameyay dhaqaalo badan sido kale yool sare ka leh oo malinba malinta ka danbeesa ku dadaala iney meel sare ka gaadhan isticmaalka youtube iyo muqaalada ay soo gudbinayaan.
Soomaalida qaar hadii aad tiraahdo waxaa lacag laga helaa Youtube aad ayey ula yaabi doonaan balse sida xaqiiqda ah waxaa laga helaa lacag fara badan.
Shirkadda youtube oo la aasaasey sanadkii 2005 ka ayaa noqotay mid aad caan u noqotey waxa ayna hadda kaalinta labaad kala baxdey shirkadda caanka ah ee Facebook halka shirkadda kaliya ee ka horeysa ay tahay shirkada Google.
Hadaba waxaan hoos idinkula wadaagi doona maqaal aan kaga hadleyno shaqsiyaadka ama channels yadii lacagaha ugu badnaa kasoo xareeyey youtube sanadkan sii dhamanaya ee 2016 ka.
Channel kaan waxa uu soo xareeyey sanadkaan 5 Milyan oo dollar, Channel kaan waxa uu soo geliyaa muuqaalo badan oo kala duwan, muuqaalada lasoo geliyo waxaa ugu badan kuwa ila qosol ah.
Channel kaan waxa uusoo xareeyey 5 Milyan oo dollar waxa uuna ka dhaxeeyey labo shaqsi, Channel kaan waxaa lagu soo bandhigaa xayeysiino iyo waxyaabo kale oo soo jiidasho badan.
Channel kaan laga leeyahay dalka Mareykanka waxa uu soo xareeyey 5.5 Milyan oo dollar sanadkii 2016 ka waxa uuna baahiyaa channel kaan muuqaalo maad u badan.
Channel kaan waxa uu soo xareeyey 5.5 Milyan oo dollar sanadkaan gaba gabada ah waxa uuna baahiyaa channel ka muuqaalo xiiso badan sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixiyaa game yada la ciyaaro.
Channel kaan ku caan baxay baahinta ila qosolada Pop ka iyo siyaasada ayaa sanadkaan 2016 ka soo xareeyey 6 Milyan oo dollar waxa uuna shaqsiga iska leh channelkaan oo ah wiil dhalin yarro u suura geliyey in ahmiyad badan uu yeesho
Haweeneydaan quruxda badan channel keeda ayaa soo xareeyey sanadkaan 2016 ka 6 Milyan oo dollar waxa ayna quruxleydaa ku caan baxday baahinta game yada gaar ahaan kuwa adag ee la rog roga.
wiilashaan style ka badan ayaa channel kooda lagu baahiyaa ila qosol sidoo kalena waxa ay caan ku yihiin baahinta heesaha raabka sanadkaan 2016 ka waxa ay soo xareeyeen 7 Milyan oo dollar.
7.5 Milyan oo dollar ayey kasoo xareeyeen youtube ka sanadkaan gabadhaan indhaha yar waxa ayna soo bandhigaan muuqaalo shactaro iyo maad leh.
Roman waxa uu sanadkaan dhamaanaya YouTube ka shaqeeyey 8 Milyan oo dollar waxa uuna baahiyaa ninkaan muuqaalo cabsi ah kuwaasoo uu kaga hadlo dilka iyo qiyaanada.
ilaa hadda inta la ogyahay channel kaan ayaa noqday midka ugu badan ee youtube lacag ka xareeyey sanadkaan dhamaadka ah waxa uuna ninkaan ka shaqeeyey youtube ka 15 Milyan oo dollar, Pew waxa uu kaga duwan yahay channel ada kale waxa uu dadka ugu jawaabaa su’aalaha ay weydiiyaan isaga oo sidoo kale sharaxaad u sameeyo wax waliba oo ay dadka ka codsadaan.
Waa maxay Sumadeyn (Branding) ?
Waxaan ahay Dadka tirada yar ee ku qanacsan aritaan
Lakiin somaliya waxaan jir wax layidhaa account ama meel ay lacagtu kuu gu soo dhacdo mana laha shirkada electronic ah ee hada caalamka ka shaqeeya
Sida PayPal card, master card iyo waliba visa card oo ah halbowlaha samayta lacagta
Sidee ayaad aduu nooga caawin kartaa caqabadaha naga haysta a rink a as?
Mnzha allh waa arin muhiima lkn wxna noo surtogelin karin sababo jiro awgeed